Fitokisana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > fahatokiana
Ny finoana no fototry ny fiainana kristianina. Ny finoana dia midika hoe fahatokisana fotsiny. Afaka matoky tanteraka an'i Jesoa amin'ny famonjena antsika isika. Ny Testamenta Vaovao dia milaza amintsika mazava fa tsy voamarina amin'ny zavatra rehetra azontsika atao isika fa amin'ny fahatokisana an'i Kristy, Zanak'Andriamanitra.
Amin’ny Romana 3,28 Hoy ny apostoly Paoly:
Ary ankehitriny heverintsika fa ny olona dia tsy misy asan'ny lalàna, fa amin'ny finoana ihany.
Tsy miankina amintsika velively ny famonjena, fa ao amin'i Kristy ihany. Raha matoky an'Andriamanitra isika, dia tsy mila manandrana manafina ny ampahany amin'ny fiainantsika Aminy isika. Tsy matahotra an Andriamanitra na dia nanota aza isika. Raha tokony hatahotra isika dia matoky azy fa tsy hitsahatra ny hitia antsika sy hanampy antsika ary hanampy antsika handresy ny fahotantsika. Raha matoky an'Andriamanitra isika, dia afaka manome azy amin'ny toky feno fa hanova antsika ho lasa olona tokony hotongaintsika Izy. Rehefa matoky an'Andriamanitra isika, dia tsapantsika fa izy no laharam-pahamehana, ny antony sy ny fototry ny fiainantsika. Araky ny nolazain'i Paoly tamin'ireo filozofa tany Atena hoe: miaina, manenika ary ao amin'Andriamanitra.
Zava-dehibe kokoa amintsika izany mihoatra ny zava-drehetra - manan-danja kokoa noho ny fananana, ny vola, ny fotoana, ny laza ary na dia ity fiainana voafetra ihany aza. Matoky izahay fa mahalala izay tena mahasoa antsika Andriamanitra ary te hampifaly azy isika. Io no fitenintsika, fototra iorenantsika amin'ny fiainana misy dikany. Te-hanompo azy isika, tsy noho ny tahotra, fa noho ny fitiavana - tsy an-tsitrapo, fa amim-pifaliana noho ny safidy malalaka. Matoky ny fitsarany isika. Matoky ny teniny sy ny lalany isika. Matoky azy hanome antsika fo vaovao isika, hampitombo azy bebe kokoa, hahatonga antsika ho tia izay tiana sy hankasitrahantsika ny zavatra ankasitrahany. Matoky azy izahay fa tia anay foana izy ary tsy manary anay. Indray, tsy ho afaka hanao izany irery izahay. I Jesoa no manao izany ao amintsika sy ho antsika, avy ao anaty, avy amin'ny asa fiovan'ny Fanahy Masina. Araka ny sitrapony sy ny tanjon'Andriamanitra dia zanaka malalantsika isika, izay navotana sy navotana tamin'ny alàlan'ny ran'i Jesosy sarobidy.
In 1. Petrus 1,18-20 Hoy ny apostoly Petera:
Satria fantatrao fa tsy navotana ianao tamin'ny volafotsy na volamena tsy miova amin'ny alàlan'ny fiovanao tsy araka ny fanaon'ny ray, fa amin'ny ra lafo an'i Kristy kosa tahaka ny zanak'ondry tsy manan-tsiny ary tsy mety maty. Nosafidiana talohan'ny nametrahana an'izao tontolo izao, fa manambara ny tenany amin'ny faran'ny fotoana izany.
Tsy matoky an'Andriamanitra amin'izao andro izao isika, fa amin'ny lasa sy ny ho avy. Ao amin'i Jesosy Kristy dia manavotra ny fiainantsika manontolo ny Raintsika any an-danitra. Toy ny ankizy kely tsy matahotra ary afa-po amin'ny sandrin'ny reniny, afaka miadana am-pitiavana amin'ny fitiavana ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina isika.